Orinasa sy mpamatsy China Cyromazine | Lemandou
Votoatin'ny cyromazine,% ≥98.0
Bika Aman 'endrika Vovoka fotsy sy fotsy
Ny sisa tavela amin'ny ignition,% ≤0.2
Fanafody biby famonoana rakitra, ampiasaina amin'ny fifehezana ny fielezan'ny zana-tsidina ao an-trano.
Fanaraha-maso ireo olitra dipteran amin'ny zezika akoho amin'ny alàlan'ny famahanana ireo vorona akoho na fitsaboana ireo toerana fiompiana.
Ampiasaina koa hifehezana ny lalitra amin'ny biby. Natao toy ny famafazana ravina hifehezana ireo mpitrandraka ravina amin'ny vegtables.
Mpanara-maso ny fitomboan'ny bibikely ho an'ny fifehezana ny lalitra mpitrandraka ravina, azo ampiasaina ihany koa hifehezana lalitra
Bibikely famonoana bibikely mahomby sy ambany izy io
Fahano ny akora fanampiny
Mpanara-maso ny fitomboan'ny bibikely amin'ny fifehezana ireo mpitrandraka ravina.
Izy io dia afaka manao ny lartera diptera sy ny pupae miaritra fametahana morphological mandritra ny fivoarana, ary ny fisandratan'ny olon-dehibe dia voasakana na tsy feno, manondro izany dia vokatry ny fanelingelenana ny molting sy ny fikolokoloana.
Tsy maninona na fampiharana am-bava na amin'ny lohahevitra io dia tsy misy fiatraikany mahafaty amin'ny olon-dehibe, saingy mihena ny taham-atody atody aorian'ny fihinanana am-bava.
Misy fiantraikany amin'ny fidiran'ny boky simika anaty vatana ny vatan'ny zavamaniry, ary misy vokany mahery amin'ny conduction rehefa apetaka amin'ireo ravina. Rehefa apetaka amin'ny tany dia tototry ny rafitry ny faka ary entina any an-tampony.
Apetaho amin'ny tsaramaso, karaoty, seleria, melon, salady, tongolo, voanjo, dipoavatra maitso, ovy, voatabia misy fanafody 12-30g / 100L, na 75-225g / hm2. Ny fatra avo lenta dia manalava ny vokany noho ny fatra ambany. Ny fatra fampiharana ny tany dia 200~1000g / hm2, ary maharitra 8 herinandro ny fatra ambony.
Ampiasaina amin'ny fifehezana ireo mpitrandraka ravina izy io ary misy fiatraikany tsara amin'ny mpitrandraka ravina. Azo ampiasaina hifehezana ny lalitra koa izy io